9 Shirkadood oo Caalami ah Ayaa u Tartamaya Dhismaha Warshad Birta Shubta oo Laga Dhisayo Ethiopia – Rasaasa News
9 Shirkadood oo Caalami ah Ayaa u Tartamaya Dhismaha Warshad Birta Shubta oo Laga Dhisayo Ethiopia
Nov 3, 2011 9 Shirkadood oo Caalami ah Ayaa u Tartamaya Dhismaha Warshad Birta Shubta oo Laga Dhisayo Ethiopia
Addis Ababa, November 3, 2011 [ras] – Sagaal Shirkadood oo caalamiya ayaa xiisaynay in ay helaan qandaraaska dhismaha warshada birta shubta ee Tossa ee dalka Ethiopia. Maalinta kama dambaynta ah ee Qandaraasku xidhmayo ayaa ah bisha December 16, 2011.
Wufuud ka kala socda shirkado caalami ah oo xiisaynaya qandaraaska, ayaa booqday Ethiopia todobaadkii tagay si ay u qiimeeyaan mashruuca iyo waxyaabaha keeni khatar lacageed. Wufuuda ayaa kala xaajooday dawlada arimaha degaanka, canshuuraha iyo awooda korontada.
Wakiilada shirkadaha ayaa ka kala socda dala dhawra oo kala ah; labo shirkadood Jarmal, saddex Shiina ah, labo Talyaani ah, hal Koonfurta Kuuriya iyo hal shirkad oo Faransiis ah. Qiyaastii dad gaadhaya 40 ruux ayaa booqday mashruuca talaadadii tagtay, isla maalintaas ayey wufuudu la kulmeen masuuliyiin ka socota wakaalada xooga korontada ee Ethiopia, Wakaalada canshuuraha iyo hayada ilaalinta degaanka Ethiopia.
Awooda wax soo saarka bilowga ah ee warshada ayaa ah 1.3 milyan oo tan sanadkii, waxayna u baahan doontaa 300mw oo awooda korontada ah sidaasna waxaa yidhi Haile Assegid maareeyaha warshada. Wakaalada xooga korontada ee Ethiopia [EEPCo] ayaa xaqiijisay in awooda korontada laga dhigayo diyaar marka uu dhamaado dhismaha mashruuca.
Tossa ayaa wajiga kowaad waxay soo saari doonta noocyada kala duwan ee bira loo isticmaalo farsamooyinka kala duwan. Wajiga labaad ee wax soo saarka warshada ayaa la rajaynayaa in ay ku jiri doonto soo saarista biraha tareenadu ku socdaan.
Shirkada ayaa dhul ka heshay degaanka Axmaarada, waxayna doonaysaa in ay kala doorato labo meelood, sidaas waxaa sheegay Shimelese Shiferaw madaxa ilaanta degaanka iyo maamulka dhulka.
Mulkiilaha warshada birta shubaysa ee Tossa ayaa ah Sheekh Maxamed Al Camuudi.
Madaxweynaha Dawlada Degaanka Somalida oo Habayo u Diray Shacabka Somalida Ethiopia.